Haweenaydii Trump lagu heystay oo lacag badan laga dhacay - BBC News Somali
Haweenaydii Trump lagu heystay oo lacag badan laga dhacay
Qareenka u dhashay Mareykanka, Michael Avenatti ayaa lagu soo oogay dacwad ah inuu lacag ka xaday gabadh jisha aflaamta galmada ah xilli ay socotay dacwaddii ka dhan aheyd madaxweyne Donald Trump, sida ay sheegeen garsoorayaasha Federaalka.
Waxaa ay sheegeen in Avenatti uu lacagta ka qaatay gabadhan oo lagu magacaabo Stormy Daniels.
Qareenka caanka ah ayaa wajahaya dhacdooyin dhowr ah oo la xiriiro wax isdaba marin iyo musuq maasuq.
Michael Avenatti ayaa beeniyay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay.
Maxay tahay dacwaddani?
Eedeymahan loo jeediyay qareenka oo ay shaaca ka qaadeen garsoorayaal ku sugan magaalada New York ayaa waxay ku sheegeen in si khaldan iyo dokumenti been abuur ah uu isticmaalay si uu lacagtii gabadha uu ugu shubto akoon uu isaga maamulo.
"Avenatti waxaa uu lacagta u adeegsaday howlihiisa gaarka ah iyo arrimo ganacsi"
Lacagta lagu eedeeyay in ninkan uu weecsaday ayaa lagu sheegey inay gaareyso $300,000.
Qareen, Avenatti ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay 'Ma jirto wax lacag ah oo ay leedahay Daniel oo aan aniga si khaldan u isticmaalay ama isdaba mariyay"
"Trump wuu bixiyay lacagta la siiyay gabadha aflaanta galmada ah jisha"
Darbi jiifkii quusan waayay ee qadarinta helay
Waxaa uu sidoo kale ka dhawaajiyay inay heshay malaayin doolar oo loogu talagalay fulinta adeegyda sharciga ah halka lacag badan ay kharaash ahaan u adeegsadeen intii ay dacwadda socotay.
Qareenkan la heysto ayaa sidoo kale wajahaya dacwado dhowr ah oo ay kamid tahay eedeymo musuq ah xilli uu ku sugnaa maxkamad ku taalla Los Angeles.
Image caption Trump ayaa horay u sheegay in uusan waxba kala soconin lacagta la siiyay Daniels
Haddii dhammaan dambiyadan lagu caddeeyo, waxaa uu Avenatti wajahi karaa xabsi boqolaal sanno ah.
Waa kumaa Avenatti?
Xilli uu wareysiyo dhowr ah siinayay telefeshino ah ayaa waxaa uu Avenatti u muuqday nin si weyn uga soo horjeedo madaxweyne Donald Trump, mar waxaa uu sheegay inuu ka baaran degayo inuu u tartami doono doorashada madaxtinimada Mareykanka sannadka 2020-ka.
Qareenka ayaa horey u doodayay gabadhan, Stormy Daniels oo dacwad ka gudbisay madaxweynaha Mareykanka, Trump, waxa ay arrinta la xiriirtay eedeymo ay soo jeedisay Daniels oo ku saabsanaa in ay la seexatay Trump sannadkii 2006-dii, balse madaxweynuhu wuu diiday eedaymahaas.